I-Pramrracetam yePowder (68497-62-1) Abavelisi - iFocoker
I-Pramiracetam powder yi-derictic dericative derivative ngenjongo yokuphuculwa kwengqondo ...
Amandla: 1018 kg / inyanga
Ividiyo yePramiracetam emfutshane (68497-62-1)
I-Pramrracetam yePowder (68497-62-1) Inkcazo
I-Pramracetam ye powder (eyaziwa nangokuthi i-Pramistar) yintuthuko engqondweni (i-nootropic) ehlanganiswa kwi-piracetam, i-racetam yasekuqaleni, ngokufaka endaweni ye-amide iqela kwi-piracetam ngeqela le-dipropan-2-ylamino ethyl. Oku kufakelwa kukuvumela i-Raw Pramiracetam ipowder ibe namandla ngaphezu kwe-piracetam.
Iinkqubo ze-Raw Pramiracetam powder aziyazi kakuhle, kodwa kubonakala ngathi ziguqula umsebenzi we-EEG kuzo zonke iikati ezivivinyayo (abancinci nabadala) kwaye zinokukwazi ukuphucula i-choline-upline. Kufana ne-piracetam kunye nezinye iidracetam ngendlela yokuba iindlela zayo zibonakala zixhomekeke kwiingqungquthela ze-adrenal kunye neminye imiphumo yendlela, kodwa ngaphaya koko ukuba iinkqubo azizange zichazwe.
Iprodracetam yePrudracam powder (68497-62-1) Suqobo
Igama lemveliso I powramet powder
Igama leKhemikhali I-Amacetam, iRaw Pramiracetam powderum
uhlobo Numama Remen (ParkeDavis)
Iqela leziyobisi I-agent anti-migraine
Inani leCAS 68497-62-1
I molecular Fi-ormula C14H27N3O2
I molecular WSibhozo 269.38 g / mol
IMasaisotopic Mass 269.38
Ukuxuba Point 47-48 ° C
Bilisaba Point bp0.15 162-164 ° C
I-Biological Half-Life Ngeeyure ze-5
umbala Amakristali amhlophe
Sukufaneleka H2O: i-soluble10mg / mL, icacile
Aukuguquka Ukwandisa imemori nokuphucula ulwazi lokufunda
ekrwada Pramiracetam powder (68497-62-1) Inkcazelo
I-Pramiracetam powder yinkqubo yesantya esichukumisayo kunye ne-nootropic ejenti yomndeni we-racetam weziyobisi. I-Pramiracetam yenye yeengqondo eziqinileyo ezikhuthaza i-nootropics ekhoyo, yi-5 kumaxesha e-30 ngaphezulu kuneyona nto inxulumene nayo. Iphucula ukugxilwa, ukuxininisa kunye nememori. Ngokuphambene nezinye zee-racetam, i-pramiracetam iye yavavanywa kubantu abadala abaneempilo endaweni yokugxininisa kuphela abantu asebekhulile abasele belahlekelwa ngamakhono abo okuqonda. Ngokukodwa, i-pramiracetam inceda ukuphuhlisa imemori yexesha elide kulezi zilingo.
Le notropic nayo isebenza njenge-europrotective agent kwaye inokuthintela ukulahleka kwememori kunye nokuncipha kokuqonda kwengqondo.
Pramiracetam powder (68497-62-1) Indlela yokuSebenza
Njengama-racetam amaninzi, kwaye ngokwenene kakhulu i-nootropiki, i-pramiracetam ithintela ukukhutshwa kweekhemikhali zengqondo, ezibizwa ngokuba ngama-neurotransmitters, ezivumela ukuhanjiswa kweempawu phakathi kweeseli zesisindo. Kodwa, i-pramiracetam yenza izinto ngokungafaniyo. Ayikukhuthaza ngokuthe ngqo iziza ze-receptor ezithile ze-neurotransmitter, umphumo wokuba uphumelele kwimveliso kunye nokukhululwa kwale ndlu ye-neurotransmitter ethile.
I-Pramiracetam inceda ngokucinga okucacileyo. I-Pramiracetam isebenza ngokunyusa u-Choline ophezulu kwi-hippocampus. Njengoko inhlanhla ingaba nayo, i-Choline iyenzeka ibe ngumcebisi we-neurotransmitter ebizwa ngokuba ngu-Acetylcholine, owona mdlali oyintloko kwiinkqubo zokuqonda, njengendlela yokugxininisa, isivinini sokufunda kunye nenkumbulo. Ngoko, yiyiphi i-pramiracetam eyenza ngokuthe ngqo ukuba ilandele i-receptor sites for Acetylcholine, leyo ivuselela umsebenzi owandisiweyo kwi-hippocampus. Lo msebenzi ogqityiweyo uphucula ukubunjwa kweememori ezintsha kunye neenkcukacha zabantu abadala.
izicelo of Pramiracetam powder (68497-62-1)
I-Pramiracetam powder yasungulwa yiParke-Davis ngendlela elandelayo kwi-1970 kunye ne-patented eMelika kwi-1979. Ngexesha elide liye lafundwa ngokubanzi njengonyango lwemiba yememori ehambelana nokulimala kwengqondo kunye nezifo ezifana ne-Alzheimer's, ngeli xesha i-FDA ayigunyazisiyo kuyo nayiphi na into ethile.
Oko kwathiwa, i-pramiracetam ibone impumelelo enkulu eYurophu. Kuthengiswa phantsi kwegama elithi brand Neupramir, Pramistar, kunye ne-Remen, liqhelekelelwe ukuba unyango lweemeko zengqondo ezinjenge-dementia, i-dyslexia kunye ne-ADHD.
kucetyiswa Pramiracetam powder (68497-62-1) Isistim
Ixabiso elilinganayo lihluka ukusuka kumntu ukuya kumntu, isincomo se-pramiracetam i-600mg-1200mg, iya kucebisa ukwahlula i-intake imihla ngemihla kwiiyithithi ezimbini okanye ezintathu, kuba i-pramiracetam ine5 kwi-6 yeeyure zobomi. Ngokugqithiseleyo ukwahlula umthamo phezu kwexesha, ngokugqithiseleyo inqanaba le-nootropic liya kuba yinkqubo yakho, kwaye bhetele umphumo jikelele.
Izifundo zoluntu ezikhoyo zisetyenziselwa ukusetyenziswa kwimihla ngemihla ye-1200 mg ye-pramiracetam, kwafunyaniswa ukuba iphumelele kwaye ixhomekeke kakuhle kwaye ingaba yindawo efanelekileyo yokubhekiselele ekunqumeni iimfuno zokuthatha umyinge. Kodwa ku soloko kuqikelele ukuqala ngeqondo eliphantsi kakhulu elinokwenzeka kwaye ulungelelanise iimali njengoko kufuneka.
Ukulumkisa okwandisiweyo kunye noXhotyiso lweZakhono lokuFunda
Amanqanaba okusebenza ngeeuroprotective